minthantzaww: ပုံတွေကို ပဲ ကြည့်ပါ ။
တကယ်တော့ သင်္ကြန်ဆိုတာ အင်မတန် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်ကာလ တစ်ခုပါ ။ ဘယ်လောက် ရေတွေရွှဲရွဲ ၊ နေပူပူ ၊ တနေကုန် ကဲကဲ ဘယ်တော့မှ ဖျားနာတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး ။ဧပြီလ ရောက်ပြီဆိုတာနဲ. အလိုလိုကိုပျော်ရွှင်နေမိတာပါ ။ သင်္ကြန်သီချင်းတွေထဲကတော့ သင်္ကြန်မိုးကားထဲက သီချင်းတွေ ၊ ဆရာမြို.မငြိမ်းရေးတဲ့ သီချင်းတွေ ကို မှီတဲ့ ၊ ဘယ်တော့မှ မရိုးနိုင်တဲ့
သီချင်းမျိုး ဘယ်သူမှ မရေးစပ်နိုင်တာတော့ ဝမ်းနည်းစရာပါ ။ ခေတ်တွေ စနစ်တွေ ပြောင်းလာလို. ကျင်းပတဲ့ အပြင်အဆင် ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ၊ ရေကစားပုံ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ငါ မြန်မာ ဆိုတာကိုတော့စိတ်ထဲမှာ မြဲမြဲ မှတ်ထားစေချင်ပါတယ် ။ ခေတ်ကာလရွေ.လျော လာတာနဲ.အမျှ သင်္ကြန်တွင်း ရေကစားသူ ၊ ရေပက်ခံသူတွေ ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု.တွေကလည်း ပြောင်းလဲ လာတာ အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာက ဆန်းနေသလဲ ဆိုရင် အရှက်တရား ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ တို.ဆိုတာ မြောင်းထဲ ရောက်ကုန်တာပါပဲ ။ မိန်းကလေးများ အင်မတန် ဆိုးရွားပါတယ် ။ ဒါဟာ တိုးတက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ပွင့်လင်းလာတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဆုတ်ယုတ်လာတာပါ ။ တိရိစ္ဆာန်
နီးနီးဖြစ်လာကြတာပါ ။ တိရိစ္ဆာန် ဆိုတာ ရှက်ရမှန်း မသိပါဘူး ။ အရှက်တရား ရှိခြင်း ၊ သိက္ခာကို တန်ဖိုးထားခြင်း ဆိုတာ လူနဲ. တိရိစ္ဆာန် ရဲ့ ကွာခြားချက် တခုပါ ။ အခုတော့ လူမြင်ကွင်းမှာ ဘီယာသောက်တာ မပြောလိုပါ ။ သို.သော် ဘီယာသောက်ပြီး လူစိတ်ပျောက်ကာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေက ပြောကိုပြောမှ ဖြစ်မှာပါ ။ လူ.သဘာဝအရ မိန်းကလေးဆိုတာ သူများလုပ် လိုက်တုလုပ်တတ်ကြတယ် ။သရုပ်ဆောင်တွေ အတုခိုးတတ်ကြတယ် ။ ဥပမာ တင်ဇာဝင့်ကျော် ဖော်လို. လိုက်မဖော်နဲ.။ သူက ဝါသနာအရ ဖော်ပြနေတာ ။ အနံ့မကောင်းတဲ့သူ ။ သူနဲ. လိုက်တုရင် မှားသွားမှာပေါ့
။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အပြိုင်အဆိုင် တိုပြတ် ဖော်ပြနေတာ အဟုတ်ထင်နေကြပေမယ့် ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေမှာတော့ မျက်နှာငယ်ရပါတယ် ။ မြန်မာအကြောင်း
သိတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေက မြန်မာမ တွေ စရိုက်ပျက် ၊ ယဉ်ကျေးမှု.ပျက်လာနေကြတာ ဝမ်းနည်းစရာပဲ လို. အပြောခံရတာ ဘယ်လောက် ရှက်စရာကောင်းသလဲ ။ ကျမလဲ မိန်းမပါပဲ ။ တခါတလေကျတော့ အဲ့လို မိန်းမမျိုးတွေကို ပြစ်ပြစ် နှစ်နှစ်ပြောပြစ်လိုက်ချင်တဲ့ စိတ်ကို မထိန်းနိုင်ပါဘူး ။
ဒီလောက်တောင် ဖော်ချွတ် ပြချင်နေရင် နေရာ တနေရာကိုပဲ သွားပါလို.။ ပိုက်ဆံလိုလို.ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဝါသနာပါလို.ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲ့နေရာကိုပဲ သွားပါ ။
မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲကို နေရာမှား ရောက်မလာစေချင်ပါ ။ မထိုက်တန်လို.ပါ ။ ကျမ ပြောတာ လွန် မလွန် အောက်က ပုံတွေကို ပဲ ကြည့်ပါ ။ အပေါ်က မြန်မာမ များ အတွက် ဒီမေးလ်ကို ရည်ရွယ်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ အောက်က
ပုံထဲက မိန်းကလေးများကဲ့သို. ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းကိုမူ လက်ခံနိုင်ပါသည် ။ မြန်မာမဆန်သော်လည်း အမြင်မရိုင်းပါ ။ လူ.အသိုင်းအဝိုင်း လက်ခံနိုင်လောက်ပါသည် ။ အရှက်သိက္ခာတရား နှင့် တန်ဖိုးရှိသော မြန်မာမများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ ။
Beautiful korean actresses wearing sexy back dresses
eniglish flash song 2
Facebook တွေသုံးတဲ့အခါ ကိုယ် Liked ထားတဲ့ဟာတွေ ဖွက်ထားနည်း
Flash Love Songs enaglish အချစ်သချင်းကောင်းလေးတွေပါ
Former Disney star Selena Gomez ditches her good girl image
Google ရဲ့ နောက်ဆုံးဝန်ဆောင်မှု့အသစ်
gsm ဖုန်း တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် setting ထည့်ခြင်း
gtalk မှာ ကိုယ်နားထောင်နေတဲ့ သူချင်းလေးကို ပေါ်နေစေချင
Gtalk မှာ အကောင့်အများကြီးဖွင့်လို့ရအောင်ပြုလုပ်နည်း
Me. You mad bro? (21pics)
New pictures: Selena Gomez's latest fashion styles
Tango Software နဲ့ ဖုန်းအလကားပြောမယ်
Window7ရဲ့ Themeအသစ်လေးပါ
You Tube က Video ကိုအလွယ်တကူ ကြည့်ကြမယ်
Youtube ထဲက သီချင်း နှင့် ဗီဒီယို ဇာတ်ကား များကို Blog ထဲ ကူးတင်နည်း
ကိုယ့်ဖုန်းမှာ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် application တွေပြန်ဖျတ်မရတော့ရင်တော့
ကိုး၇ီးယားမင်းသမီးတွေ၇ဲ့ ပွဲတက်ဖက်၇ှင် မြန်မာမင်းသမီးတွေအတု မခိုး၇န်
ဂုဏ်သိက္ခာ.. သတ္တိနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်တန်ဖိုးထားမှု
ဂျပန်မော်ဒယ်လေး၇ဲ့Plastic Surgery to Look Like
စာအုပ်စင်မှ မိတ်ဆွေတို့ ဖတ်ရှူနိုင်တဲ့ စာအုပ်စာရင်းပေါင်းချုပ်ပါ။
မိန်းကလေးများ စိတ်ဝင်စားနိုင်ဖွယ် ရှိသော ယောင်္ကျားများ
မိန်းကလေးများအားလုံး အသိတရားလေးနဲ့ သတိထားကြပါ။
မိမိ Facebook Wall ပေါ်မှာ ဘယ်သူမှ စာမရေး/ပုံမတင်နိုင်အောင်လုပ်မယ်
မိမိတို့ ရဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ပြန်လည်တင်ပြ မျှဝေဖို့ နဲ့ဘလော့မှာ တင်နည်း
ရဲတိုက်နဲ့ ချစ်သုဝေကို မီဒီယာများက ချီးကျူး
အထီးလေးက အမကနေ ပြောင်းလာသူ၊ အမလေးက အထီးကနေ ပြောင်းလာသူ
အမျိုးသမီးတစ်ထောင်ကျော်အား အဓမ္မပြုကျင့်သူ ဖမ်းဆီးခံရ
အားဖြည့်အချိုရည်နှင့်အရက် တွဲဖက်သောက်ခြင်းက ဆိုးကျိုးပိုများ
ဘောလုံးပွဲများတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်။ ဆိုက် foodball
ရေသန့် ဘူး နဲ့အမျိုးသမီးများ အတွက် အထူးသတိပြုရမည့် အချက်"
" အချစ် " ဆိုတာ လူ့ဘ၀ထဲမှာ မရှိမဖြစ်အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ပင်ရေးသားနေကြသော သင်္ကြန် အကြော...နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်...Facebook ကို အသုံး​ချကာ က​လေး​ငယ်များ​အား​ လိင်​ပိ.myanmarflashsongs နားဆင်၇န် ဒီမှာတော်တော်စုံပါတယ်...အင်္ဂလိပ့်မြန်မာဒစ်၇ှင်န၇ီပြုံးအလှပိုင်၇ှင်များဘဝရှင်သန်နည်းများ၇ုပ်၇ှင်ကြည့်ချင်၇င်ဒီကနေကြည့်နိုင်ပါတယ်24. မြန်မာ၇ုပ်၇ှင်ကြည့်ချင်၇င်ဒီကနေသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်...နိုင်ငံရဲ့ကုတ်တွေပါမြန်မာ၇ုပ်၇ှင်ကြည့်ချင်၇င်ဒီကနေသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်...Flash Love Songs enaglish အချစ်သချင်းကောင်းလေးတွေပနိုင်ငံခြားနာမည်ကြီးstar တွေအကြောင်းသိချင်၇င်ဓာတ်ပ...jမြန့်မာ့ေ၇း၇ာသတင်းများ...ဖတ်နိုင်ပါတယ်ချစ်နိုင်ကြပါစေ(ခွှတ်လ့တ်ရင်း ၊နားလည်သည်းခံရင်း)အမေများနေ့ကိုဂုဏ်ပြုခြင်း လောကမှာ အမြင့်မြတ်ဆုံးမေ...ပုံစံအဆန်းဆုံးရှူးဖိနပ်များအပန်းဖြေစရာ ပုံရိပ်ကမ္ဘာ...ရာစုနှစ်ရဲ့ ကြေကွဲဖွယ်အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံ..အပန်းဖြေစရာ ပုံရိပ်လေးတွေပါမိန်းကလေးအတွက် ဘဝဒဿနရုပ်ပုံထဲက စကားလုံးများပျော်ရွှင်ခြင်း ၁ဝခုဘ၀....တဲ့ ကောင်းလွန်းတယ်ဗျာေ၇းထားတာလူပျိုတွေဘာကြောင့်မစွံတာလဲ..မညီမျှချင်းများဓာတ်ပုံများပါသောင်းပြောင်းထွေလာ ဆေးပညာ ၂၀၀၉ သင်္ကြန်ရေ. ပုံလေးများ..အမှတ်တ၇မန္တလေးသင်္ကြန်ကပုံ၇ိပ်တွေပီါ သင်္ကြန်ရဲ့ ရသတချို့ ပုံလေးတွေပါမိန်းမဆိုတာ.....နှင့် ယောက်ျားဆိုတာ..သူတို့လေးတွေ၇ဲ့အနမ်း...အချစ်နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့မေးခွန်းတွေပါ..ဖြေကြည့်နော်အချစ်မှာမှတ်ထားရမဲ့ (၂၅) ချက်တန်းတူညီမျှ အမျိုးသမီးဝါဒအောင်မြင်မှု တံခါးကို ဖွင့်လှစ် ပေးနိုင် သည့် လျှို...သူတစ်ပါးအပေါ်အနိုင်ယူနည်းမောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ ပေါင်းသင်းခြင်းအနုပညာငါး​များ​ဖြင့်​ ​ခြေ​ထောက်ပြုပြင်ခြင်း​​ကြောင့်​ H...ဖေ့စ်ဘွတ်ကြောင့်…ပျိုဖော်ဝင်စအရွယ်နှင့် အာဟာရ ............လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်မျိုးစပ်ထားသည့်သန္ဒေပေါင်း(150)ကျော...ကာမတဏှာ ကြောက်စရာ***ကိုယ်ကျင့်သီလဆိုတာ အသက်ထက် တန်ဘိုးကြီးသည်ပါကစ္စတန်၏ ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓဘာသာလက်ရာများလူတိုင်း ကြုံရနိုင်တဲ့ သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက် (Mid-...အာရှသားတွေ ဘာကြောင့် လက်မထပ်သလဲ၊ အပျိုကြီးလုပ်တာ ရ...နာဇီခေါင်းဆောင် ဟစ်တလာ သတ်သေသွားခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဟုဆို..ထရပ်ကားဖြင့် တိုက်မိသည့် ကလေးငယ်အား ဆေးကုသစရိတ် မေ... လူငယ်တော်တော်များများက ဘိလပ်ရညအောင်မြင်မှုရဲ့ လျှိူ့ဝှက်ချက်မှာလူနှစ်ယောက်ပုံပြင်သူငယ်ချင်းဆိုတာသူရဲကောင်း မဖြစ်ချင်သူပုံလေးတွေကြည့်ပြီးပြုံးနော်၂မိန်း​​မ​​ချောများ​​၏ ဝတ်လစ်စလစ်ပုံများ​​ ကြည့်​​ရ...ရွှေစည်းမျဉ်းကို မေ့လိုက်ပါအောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ချစ်ခင်လာဖို့ နည်းလမ်း ၁၀ ခုသင့် အနာဂတ်ကို ခန့်မှန်းနည်းသည်နေ့အတွက်တော့သင် ပျင်းတဲ့အခါ လုပ်စရာ (၁၀)ခုအောင်မြင်မှုရရန်အတွက် အတားအဆီးမှန်သမျှကို ကျော်လွှာ...အောင်မြင်မှုအတွက် စုစည်းခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စမတ်ကျအောင် ဘယ်လိုနေမလဲဘ၀ရဲ့ ဘယ်အရာကိုမဆို ပြောင်းလဲဖို့ မေးခွန်း(၃)ခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု တိုးတက်စေဖို့ကိုယ်မလုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်ရတဲ့အခါပျာ်ရွှင်မှုကို ရွေးချယ်ပါသင့်ရဲ့ ပန်းတိုင်ကို သွားရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ သော့ချက...အလုပ်များလှတဲ့တစ်နေ့တာမှာ သင့်အတွက် ကိုယ်ပိုင်အချိ...တကယ်လိုချင်ရင် ရမှာပါမလွဲLifestyle ပြောင်းလဲခြင်းစကားပြောကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အချိန်ဆွဲတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ဘယ်လိုဖျောက်ကြမလဲအချိန် စီမံခန့်ခွဲမှု (Time Management)စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကို ကျော်လွှားခြင်းသင့်ဘ၀ရဲ့ အိပ်မက်ကို တွေ့ရှိဖို့ဘယ်လိုခွင့်လွှတ်ကြမလဲ ?အိပ်ရာစောစောထသူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့သင်ရုပ်ဆိုးသလားအမိမြန်မာနိုင်ငံသားသမီးများ Culture ထိန်းသိမ်းရေး ...မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ရင်...78 ချက်ထဲက ဘယ်န...ပြေတီဦး နဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့၇ဲ့ မင်္ဂလာအမှတ်တ၇ပံ...ဖတ်ခဲ့ဘူးသော အချစ်စာမျက်နှာများ(၂)ရှုံးနေသော လူသားများဆိုးတော့ဆိုးပါ... သို့သော်.... မမိုက်မဲနှင့်မိန်းမကောင်းအင်္ဂါ (၆၄) ရပ်ဒီလို အမေမျိုးလည်း ရှိတယ်ကမ္ဘာ့စိတ်ပျက်ဆိုးဝါးဖွယ်ကောင်းသော မျက်နှာများခွဲစိတ်စရိတ်မတတ်နိုင်လို့အစာအိမ်ကိုဓါးနဲ့ထိုးဖောက်...သားပိုက်ကောင်ကိုမြိုတဲ့မြွေအံ့သြဖွယ်ရာ တိရစ္ဆာန် သန္ဓေသားလောင်းများသင်ဘယ်တော့မှ မမြင်ဖူးသော မြင်ကွင်းတစ်ခုရေကို အလာ့ဂျစ်ဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးအလှူရှင်မိန်းမကိုယ်(vagina)ထဲမှ ကျောက်ကပ်ထုတ်ယူခဲ့...၁၈ ကီလိုဂရမ်လေးတဲ့ကျူမာဖယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးAnother amazing weight loss story. From cutie to s...Hollywood Siblings Then and Now (24 photos)Selena Gomez 'Havingalot of fun' since Justin Bi...အမျိုးသမီး ကာယဗလမယ်Beautiful korean actresses wearing sexy back dress...ကိုး၇ီးယားမင်းသမီးတွေ၇ဲ့ ပွဲတက်ဖက်၇ှင် မြန်မာမင်...New pictures: Selena Gomez's latest fashion styles...23 more crazy funny pictures of insane internet #2...The main reason why I like going to festivalsIraq veteran who lost face and hands, findsအ၇ုပ်တွေပါEmbarrassing moments of celebritiesကားကြော်ညာ29 Awesome Photos Bring You Back to the Good Old T...Emma Watson finally shows off killer body on GQ ma...ကျည်ကာကား(၅)စီးတောင်ဝယ်မယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး၊ အဟော့ဆုံး အတွင်းခံဝတ် ပြပွ... ဘလော့ဂါများရဲ့ပို့စ်များ အတူတူ လင့်ချိတ်ဖို့
သတင်းများဖတ်၇န်ဆိုက်များဖိုင်များတင်နိုင်သည့်ဆိုက်ပုံများဓမ္မဆိုင်၇ာ ဆိုက်များ...ဘလော့ဂါဆ၇ာများ.....ဆိုက်တွေပါအသုံးဝင်သော ၀က်ဆိုဒ်များပါDownload များ http://download.cnet.com/windows/do...ဆော့ဝဲလ်များဒေါင်း၇န်မိုးထက်မြင့်နည်းပညာ၇န်အောင်ဘလော့ဂါဆိုက်သွားချင်၇င် ဒီကနေသွားနော်မင်းသန့်ဇော်ဘလောဂါFlash Love Songs enaglish အချစ်သချင်းလေးတွေနားထောင...သတင်းဝက်ဆိုဒ်များတော်တော်စုံပါတယ်တ၇ားတောက်ဆိုက်များအစုံဘောလုံးပွဲသတင်းတွေနဲ့ ဆိုက်ပေါင်စြုံ့ကည့်၇န်ဘောလုံးပွဲ hightlight ကြည့်ချင်၇င်မြန်မာဘလော့ဒ်တွေကိုဝင်ရေးနေတဲ့အစ်ကိုကြီးတွေ/ဆရာတွေ...ဘလော့ဂါ ကောင်းလေးမျာ့းမြန်မာ့ဘလော့ဂါမြန်မာဗွီဒယိုနှင့်ကိုး၇ီယားကားမျာြး့ကည့်၇န်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စာမျက်နှာများကျော်နိုင် ခွနိုင်ဖို့ ဝက်ဆိုက် တွေပါသံစဉ်လှိုင်းmp4သချင်းတော်တော်များများတင်ထားတဲ့ဆိုက...မွန်သချင်းများနားထောင်ချင်၇င်ဒီဆိုက်လေးမှာစုံ့တယ်ေ...ပြင်ပမီဒီယာ...သတင်းများဖတ်၇န်
Windows XP ရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်(၄၀)အပေါ်သို့ မျှားတပ်၇န်ဘလော့အတွက်Gtalk Translation အကောင့်တွေပါ…ဘလော့ဂါေ၇းနည်း...လုပ်နည်းအပြည့်စုံဘလော့ အတွက်နာ၇ီထည့်ချင်၇င်အပေါ်သို့ မျှားတပ်၇န်ဘလော့အတွက်၂အပေါ်သို့ မျှားတပ်၇န်ဘလော့အတွက်ဘလော့ဂါ templates များလိုချင်၇င်Gtalk မှာ အကောင့်အများကြီးဖွင့်လို့ရအောင်ပြုလုပ်နည..ကွန်ပျုတာ မ hang ခင်သိထားသင့်တဲ့ အချက်များဆော့်ဝဲလ်တွေ install လုပ်ရင်အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ် ။Information ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးရဲ့ ဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အ...ကျော်ချင်ခွချင်တယ်ဆို၇င်Adobe Flash Playerကော်နရှင်မကောင်းလျှင် သုံးနိုင်သောနည်းစနစ်များမြန်မာပြည်ကသူငယ်ချင်းတွေကျော်ခွချင်တယ်ဆို၇င်ဒီဆိုက...သချင်းတွေဖိုင်ဆိုက်ကြီးတွေပိုချင်၇င်....ဒီဆိုက်ကနေ...ဇော်ဂျီ့မြန်မာဖောင့်zawgyiလိုချင်၇င်downloadAdobe Flash PlayerWindows7Personalize ပြဿနာနည်းလမ်းလေးတွေပါ..........ကွန်ပျူတာ မြန်အောင်ပြုလုပ်နည်းကွန်ပျူတာ ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဆော့ဝဲလ်များGtalk&Gmail အကောင့် password များ မေ့နေလျှင်(သို့)...သင့်အကောင့် ban ခံရလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား !!!!Default ကိုယ့် Gmail ကို သူများဝင်သုံးနေလားဆိုပြီး...Repairing Memory Stick...ပျက်လျှင်ပြင်နည်းblog ကော်ပီယူလို့မ၇၇င်..ဒီနည်းလေးသုံးလိုက်ပါgsm ဖုန်း တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် setting ထည...တေးသီချင်းများတိုက်ရိုက်တောင်းဆိုရန်ဘောလုံးပွဲများတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်။ နှင့်မြန်မာဘေ...WinX DVD Ripper Platinum 6.3 နှင့် AVG An...IcoFX v2.0.1 ဓာတ်ပုံသမားတွေအတွက်ဖိုင်ဆိုက် 100 MB အထိ ပို့လို့ရပါတယ်Gmail Password အကြောင်းကိုယ်ဖတ်နေတဲ. Website စာမျက်နှာကို PDF file အဖြစ်သ...Desktop ပေါ်တွင် Sleep Command Shortcut Key ကို ဖန်...နောင်လတ်(မန်း) RUN ရဲ့ History များ ဖျက်ခြင်းRun Box အတွက် Commend Key များMozilla Firefox နဲ့ ခိုးမယ် ၀ှတ်မယ် သိမ်းမယ် ပြင်မ...ကိုယ် online မှာ မရှိတဲ့ အချိန် ကိုယ့် G mail ဆီကိ...ကွန်ပျူတာအကြောင်းလေးတွေပါGmail အကောင့်ထဲကို ကိုယ်လက်မခံချင်သူရဲ့  Mail တွေေ...အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံးသူများမိမိ၇ဲ့password တွေမပါအေ...G-talkမှာမြန်မာဖောင့်မပေါ်ပဲအတုံးလေးတွေပေါ်နေ၇င်
၀ိညာဉ်သစ် စာအုပ်စင်မှ မိတ်ဆွေတို့ ဖတ်ရှူနိုင်တဲ့ စ...လေ့လာမှတ်သား အချစ်နှင့် အိမ်ထောင်ရေး စာအုပ်များဖတ်၇ှူစ၇ာစာအုပ်ကောင်းလေးများ.....ebook များတော်တော်စုံစုံပဲနော်ဖတ်ချင်၇င်Download ရယူနိုင်သော စာအုပ်များအစုံ၇ှိပါတယ်
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ အံ့ဖွယ်(၁၈)ပါးပညာရှိ အဆိုအမိန်လေးများကမ္ဘာ့ပညာရှင်များ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်အမြင်ခန္ဒာတ၇ား၇ှုနေသောဆ၇ာတော်များမြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာသာ ရောက်မလာခဲ့ရင်။" ဘ၀မှာစိတ်ချမ်းသာဖို့ "ဆရာတော်ဦးဇောတိက၏...အဆုံမသြ၀ါဓများတရားတော်များပဋ္ဌာန်း (၂၄) ပစ္စည်း (ပုံနှင့်တကွရှင်းလင်းချက်)မေတ္တာဆန်ရေ ( စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဓလေ့ဆိ...ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူ အဟောင်း ၊ အခြားတ၇ားစာပေများစကားနောက်..က တကယ့်တရာဲး့ငရဲကြီးရှစ်ထပ်ဆိုတာကို နော်ဝေးနိုင်ငံနှင့် ဖင်လန...လောကနီတိဗုဒ္ဓဘာသာ ငါးမျိုးလူတကာ့လူ သို့မဟုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆရာတော်ကြီးများ၏ အသိပေးစကားစုများသင်လူပီသသောလူဖြစ်ပြီလား**ဘုရား ကို အမှန်တကယ် ပူဇော်နိုင် ကြပါစေ****
အဖြူေ၇ာင်လေးကိုလည်းဆေးမဆိုးနဲ့ အေ၇ာင်ပျယ်လွင့်အောင်လည်းမင်းမလုပ်နဲ့ အဖြူေ၇ာင်လေး၇ဲ့အတိုင်းပဲထားကွယ် သူငယ်ချင်း၇ယ်............. Home